GPS मोबाइल म्यापर,, क्याप्चर डाटा - Geofumadas
जीपीएस मोबाईल मैपर 6, डेटा कैप्चर गर्नुहोस्
अप्रिल, 2010 cadastre, जीपीएस / उपकरण, topografia
El मोबाइल मैपर6पीढी हो जुन CX र स्थान बदल्न आयो प्रति, पहिले म्याग्लान द्वारा उत्पादित। आज हामी कसरी फाँटमा डाटा क्याप्चर गर्ने हेर्नेछौं।
1। आधारभूत कन्फिगरेसनहरू
डाटा क्याप्चर गर्न, कम्प्यूटरले सफ्टवेयर स्थापना गरेको हुनुपर्छ मोबाइल मानचित्रण, जो उपकरण खरीद गर्दा डिस्क संग आउछ र मार्फत स्थापना गरिएको छ सक्रिय सिङ्क। (सावधान रहनुहोस्, यो संग भ्रम नगर्नुहोस् मोबाइल मेपर कार्यालय)
यसलाई कार्यान्वयन गर्न, यो सकियो होम> मोबाइल म्यापि।। नेभिगेसन दृश्यले पहिलो पटक लोड गर्दा जब केहि मापदण्डहरू विकल्पबाट कन्फिगर गरिएको हुनुपर्छ मेनु तलल्लो दायाँ भागमा।
दर्ता: यहाँ तपाईले स्थापना गर्नु पर्छ यदि हामी यसलाई स्वचालित तवरले पटक पटक स्थिति रेकर्ड गर्न चाहान्छौं। उदाहरण को लागी, हरेक seconds० सेकेन्ड।
हामी यसलाई परिभाषित गर्न सक्दछौं यसलाई स्वचालित रूपमा विस्थापनको हरेक निश्चित रकमको लिन। यो मार्गहरूको लागि उपयुक्त छ।
यो यो पनि भन्न सकिन्छ कि यो म्यानुअली लिइएको छ, जब म यसलाई चयन गर्दछु। र यसको लागि, यसलाई माथि दर्साइनुपर्दछ, औसत स्थितिहरू कति लामो हुन्छ, यसको मतलब यो छ यदि मैले seconds 45 सेकेन्डलाई स indicate्केत गरें भने उपकरणहरूले त्यस समयमा डाटा स collect्कलन गर्दछ र यसले औसत मान लिन्छ।
एकाइहरु। यहाँ स्थापित छ यदि हामी मिटर, किलोमिटर, मील, फिट आदिमा काम गर्ने छौं। क्षेत्र को लागी उही।
त्यहाँ अन्य प्यारामिटरहरू छन्, अब हामी केवल ती परिभाषित गर्न जाँदैछौँ।
2। नया नक्शा बनाउनुहोस्
यसको लागि, यो सकियो मेनू> नयाँ ... मोबाइल म्यापरले कसरी काम गर्दछ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ, डाटा भण्डारण कहाँ जान सकिन्छ भन्ने जान्न।
फाइलनक्शा यो कन्टेनरको एक प्रकार हो, साथै आर्कभ्युको .apr, आर्कजीआईएस। एमएक्सडी। कुनै डाटा समावेश गर्दैन, केवल लोड सेटिंग्स सेटिंग्स। तपाईंले नाम निर्दिष्ट गर्नुपर्नेछ र कहाँ भण्डार हुनेछ।
.Shp फाइल। यस उपकरणले आकार फाइल प्रकारका तहहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, जहाँ कब्जा गरिएको जानकारी भण्डार गरिएको छ। जब सिर्जना हुन्छ, आवश्यक .dbf र .shx फाईलहरू पनि सिर्जना गरिन्छ।
यसको लागि यो भयो मेनू> तहहरू, र त्यहाँ तपाईं अवस्थित तह, वा एक नयाँ चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यी तहहरू लाइन, पोइन्ट वा बहुभुज प्रकार, २ डी वा थ्रीडी हुनसक्दछन्। तब विशेषताहरू पाठ पाठको, संख्यात्मक, हो / होइन, मिति, छवि वा अडियो समान उपकरणहरू द्वारा कब्जा गर्न सकिन्छ।
यसैले तपाईले तहहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ: भवनहरू, सडक अक्षहरू, नियन्त्रण पोइन्टहरू, रूख, इत्यादि।
प्रत्येक लेयरले .dbf मा भण्डारण गरिएका विशेषताहरू हुन सक्छन्, जस्तै: मालिक, फोटो, घर नम्बर, अडियो घोषणा, आदि।
चिन्ह, रंग, मोटाई, भर्न जस्ता विशेषताहरू पनि प्रदर्शित गर्नुहोस्।
प्रत्येक तहमा प्रदर्शन मापन हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, यदि मैले नगरपालिका सीमा तह १: १०,००० मा सेट गरेको छु भने, म यसलाई देख्ने छैन जबसम्म यो माथि नापिन्छ र यो बाटोमा प्राप्त हुँदैन जब म १: 1०० तराजुमा पार्सलहरूसँग काम गरिरहेको छु।
तपाईं अवस्थित तह पनि लोड गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै सम्पत्ती वा सडक नक्शा। यो जियोरेफरेन्स्ड छवि पनि हुन सक्छ।
.Gr र .crg फाइलहरू। यी हामीले बनाइएका बुँदाहरूका रूपमा सिर्जना गरिएका छन्, र आवश्यक छन् ताकि उचित समयमा हामी अन्य स्थिर उपकरणहरूको साथ डाटाको आधारमा पोष्ट-प्रसंस्करण गर्न सक्दछौं। पोष्ट-प्रोसेसिंग बिना डाटा to देखि meters मिटरको त्रिज्यामा हिड्नेछ -कुनै ब्राउजर जस्तो- पोस्ट-प्रोसेसिंगको साथ उप-मेट्रिक सटीकता प्राप्त हुन्छ।
चेतावनी: मोबाइल म्यापर ((MM6) बेस हुन सक्दैन (अहिले सम्म)। तिनीहरू पुरानो आधार हुन सक्छन् मोबाइल मेपर प्रो, मलाई लाग्छ CX र म्यागेलो प्रोमर्क3(यो US $ 2,500 को आसपास जबकि एमएमएक्सएनमक्स $6देखि तल जान्छ, लगभग के प्रो या CX लायक थियो)
यसको अर्थ ठूलो मात्राको लागि, तपाईंसँग हुन सक्छ Promark3 र M MM5, लगभग १० अमेरिकी डलर। सायद एउटा अतुलनीय समाधान यदि हामी ब्रान्डको साथ मुल्य तुलना गर्‍यौं भने TRIMBLE.
यो प्रक्षेपण सेट गर्नु आवश्यक छ र पहिलो पटक लेयर भरी भएको प्रणाली को समन्वय गर्न आवश्यक हुनेछ।
3। डेटा कैप्चर गर्नुहोस्
एकपटक माथि भएको भएपछि, जीपीएस सुरु हुन्छ र हामी छविमा देखाइएका एक जस्तै विन्डो हुनेछ।
दृश्यात्मक उपग्रहहरूको संख्या माथि देखाइएको छ, समकक्ष तल देखाइएको छ, र दर्शकमा रहेको स्थान।
डेटा खिच्न, यो तलको मेनुबाट चयन गरिएको छ, बायाँ तिर, जहाँ यो भन्छ लग। यदि हामीसँग स्पेनिशमा छ भने यसले भन्नेछ दर्ता। यसले तुरून्त हामीलाई कुन लेयरमा हामी बिन्दु समात्नको लागि सुरक्षित गर्ने छनौट गर्न दिन्छौं, र यदि यो म्यानुअली कन्फिगर गरिएको छ भने, जुन मैले चरण १ मा वर्णन गरें, त्यसपछि अगाडी अगाडी पट्टी सेट सेकेन्डसम्मको समयले प्रक्रिया कब्जा गर्नेछ।
त्यसपछि प्यानल विशेषताहरू प्रविष्ट गर्न खुल्छ। यदि तपाईंसँग अर्को कन्फिगरेसन छ, जस्तै हरेक १० मिटरमा, हामी कार र ड्राइभको ड्यासबोर्डमा उपकरणहरू छोड्न सक्दछौं, यसले प्रत्येक पटक १० मिटरको विस्थापन फेला पार्दा यो क्याप्चर बनाउँदछ।
अर्को पोस्टमा हामी कसरी डाटा डाउनलोड गर्न र कसरी हेर्नेछौं तिनीहरूलाई पोस्टप्रसोसेस गर्नुहोस्.
ArcView जीपीएस SHP
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो तपाईंको अन्तिम चुम्बनको .37.5 XNUMX.। सेकेन्ड
अर्को पोस्ट ArcGIS 10 मा एक नजरअर्को »
GPS 76 जवाफ "GPS मोबाइल म्यापर 6, क्याप्चर डाटा" लाई
फेब्रुअरी, 2020 बजे
पोष्टप्रोसेस कोड खरीद गरिएको छ। यो जीपीएसको साथ आउँदैन; त्यसोभए तपाईलाई त्यो कोड दिन सक्ने केवल एक व्यक्ति हो जसले तपाईलाई यो बेचे, यदि तपाईले यसलाई दिन चाहानुहुन्छ भने।
शुभ प्रभात म सँग दुई जीपीएस छन् जुन एक मित्रले मलाई बेचे
yadira Prieto भन्छिन्:
अक्टोबर, 2016 बजे
मित्र मैले पहिले नै पृष्ठमा गएँ जहाँ तपाईं सफ्टवेयर हुनुहुन्छ भन्नुहोस् तर यसले भन्छ कि यो अवस्थित छैन र यो मोबाइल म्यापरको लागि अपडेट गरिएको छ 6.0
कार्लोस सरङ्गो भन्छिन्:
फेब्रुअरी, 2016 बजे
मलाई थाहा छैन कि कसरी 10 मोबाइल म्यापरमा समकक्षहरू प्रविष्ट गर्न यदि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ
लियोनार्डो Zapata भन्छिन्:
मई, 2015 मा
नमस्ते म बारी सकेन एक MM6 छ, र सफलता बिना फोन नम्बर गर्न संवाद गर्न प्रयास, मलाई 2010 देखि यो सक्रिय विभिन्न सक्रियता कोड संग टोली सुरक्षित छ काम छैन मदत गर्न चाहनुहुन्छ। यो अपरेसनमा राख्न सक्षम हुन तपाईंको सहयोगको प्रशंसा गर्दछु।
jon fredy baron भन्छिन्:
डिसेम्बर, 2014 बजे
नमस्ते, म तपाईंलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ मेरो मोबाइल म्यापर6मलाई थाहा छैन कि यसलाई कसरी सम्वन्धित समकक्षका लागि कोलम्बियामा कन्फिगर गर्नुहोस्।
जुलाई, 2013 बजे
मैले सामान जीपीएस MobileMapper6कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ बनाउन मलाई बता सक्छ, म चियापास मेक्सिकोको हुँ, म सामान कहाँ किन्न बसे सबैभन्दा TOPOGRAFIA नजिकै स्टोरमा आवश्यक छ। अग्रिम मा म तपाईंको जानकारी को लागि धन्यवाद, एक संक्षिप्त उत्तर को लागि इंतजार गरदैछ।
रोक मोरान भन्छिन्:
मार्च, 2013 बजे
म 10 मीटर पोस्ट प्रोसेस कोडको एक GPS आस्टेक मोबाइल म्यापर 0.5 पोस्टप्रोसेस प्रेसिजन प्राप्त गर्न जाँदैछु र मलाई प्रदायकले मलाई एक GPS ट्युनिंग पूर्ण स्थापना र MM SUITE को कन्फिगरेसन बनाउने प्रदाता बताउँछ। र ती उपकरणको SETUP गर्न सक्दछन् र कि यसको अतिरिक्त लागत $ 995 pesos छ। प्रश्न यो हो कि यदि यो मेरो लागि उपयुक्त छ कि तिनीहरूले आवश्यक कन्फिगरेसनहरू संलग्न गर्छन् र यो रकम तिर्छन् वा म तिनीहरूलाई यति धेरै जटिलता बिना गर्न सक्छु?
ARTURO TEMOL भन्छिन्:
नमस्ते दिउँसो म इन्टरनेट Mibile नक्साङ्कनकर्ता-6 कसरी Google धरती मीटर वा मेरो टोली र मीटर डिजिटल मानचित्र PROGAMAR कसरी राख्न सक्नुहुन्छ सोध्न हुनेछ
जर्ज ई tarazona v भन्छिन्:
राम्रो सम्बन्ध मसँग6मोबाइल म्यापर छ, के तपाइँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ जहाँ पोस्ट प्रोसेसिंग धन्यवादका लागि चरणहरू कसरी गर्ने वा कसरी गर्ने
बुक्कामंगा कोलम्बियाबाट। धन्यवाद
हेक्टर रामोस भन्छिन्:
अप्रिल, 2012 बजे
नमस्ते, म तिमीलाई थाहा चाहन्छु। तपाईले मलाई कार्यक्रममा मद्दत गर्न र मेरो मोबाइल मोपर6सुरु गर्न सक्नुहुनेछ।
डिसेम्बर, 2011 बजे
यहाँबाट तपाईं MobileMapper6को लागि सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
ftp://ftp.ashtech.com/ मोबाईल%20 म्यापिङ् / मोबाईलमैपेर% 206/
लुइस परी स्वर्ग भन्छिन्:
म मेक्सिको हुँ, र म Windows6छ मेरो ल्यापटप, मोबाइल नक्साङ्कनकर्ता7दिइएको थियो, र म जीपीएस सफ्टवेयर स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले मलाई Windows संस्करण लागि यस्तो कार्यक्रम संग समर्थन गर्न सक्छन् ???
मा तपाइँलाई धन्यवाद दिनुहोस्
अक्टोबर, 2011 बजे
.Map फाइलहरूमा डेटा समावेश छैन, तर राखिएको जानकारी समावेश गर्दछ .shp फाइलहरूको सन्दर्भ।
तपाईंले तीन फाइलहरू डाउनलोड गर्नुपर्दछ: .shp .dbf र .shx तपाईंको कम्प्युटरमा। यी पर्याप्त साधारण फाईलहरू हुन्, कुनै पनि GIS प्रोग्राम खोल्न र तिनीहरूलाई dxf मा निर्यात गर्न सक्दछ तिनीहरूलाई AutoCAD मा खोल्नको लागि।
यसलाई गर्न विकल्पहरू:
Ashtech मोबाइल मैपर कार्यालय
Microstation XM वा माथि
नमस्ते, तपाईले मलाई कसरी मद्दत गर्न सक्नु भएको थियो कि कसरी मोबाइलमैप कार्यालयबाट .map फाइल निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ ताकि यो Autocad 2010 मा खोल्छ .. धन्यवाद
सेप्टेम्बर, 2011 बजे
कृपया कसैले मलाई संकेत दिन, म भिन्न भिन्न बनाउँछु र मैले एउटा त्रुटि पाउँछु जसले भन्छ: x xxxx.grw फ़ाइल भेक्टरहरू नक्शामा मेल खाँदैनन् - त्यो यस्तो हो कि त्यो त्रुटि धेरै चोटि बाहिर आइसकेको छ र म चिन्तित छु किनभने यस्तो देखिएको छ कि सुधार गरिएको छ तर मलाई थाहा छैन यदि डाटा विश्वसनीय छ कि बाहिर आयो सन्देश बाट - यदि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छन् धन्यवाद।
त्यो मुल्यको लागि, तपाईंको देशमा कुनै पनि अष्टेच वितरकको साथ। कमको लागि, eBay मा।
पोस्ट प्रोसेसिंग जीवनको लागि होईन, एक टोलीबाट अर्को स्थानान्तरण योग्य छैन।
जोन अवकाश भन्छिन्:
म कहाँ स्पेन आयात गर्न अनुमति दिन्छ कि कुनै पनि स्टोरमा 1000 यूरो भन्दा कम लागि यो जीपीएस खरिद गर्न सक्नुहुन्छ नमस्कार, तपाईंले मलाई टिप्पणी गर्न सक्छ? यदि त्यो मूल्यमा यो सम्भव छ भने, त्यो मूल्यमा पोस्ट मूल्य समावेश गर्दछ? के पोस्ट प्रसंस्करण जीवन-लामो वा यो अद्यावधिक हुनु पर्छ?
जुलाई, 2011 बजे
कम्पास कन्फिगर गर्न सजिलो छ तपाईंले केवल चरणहरू पछ्याउनु पर्छ
समतल ठाउँ मा जीपीएस राख्नु र तपाईं दिन जब सूचक labrujula खोल्दै aparase उत्तेजित गर्दछ जो विपरीत दिशा घुमेको उत्तर सीपीएस इशारा कम्पास होल्ड कर्सर जाँच्नका लागि
नमस्ते मेरो प्रश्न निम्न एक हो जसमा मैले3जीपीएस मोबाइलमैप एक्सटेक्सक्स्युमक्स छ र म जान सक्छ कि म कसरि अन्य हड्डी सेवर संग एक को ठेगाना लगा सकते हो कि एक वास्तविक समय मा मेरी तकनीशियनों मध्ये एक को स्थिति
मलाई जान्न चाहन्छु कि यो कसरी प्राप्त हुन्छ र मलाई यो गर्न आवश्यक छ
नमस्कार मेरो सबै प्रश्न यो हो:
म3जीपीएस6मोबाइलमैप छ र म जान्न चाहन्छु कि र के मलाई अन्य को साथ एक पत्ता लगाउने को आवश्यकता छ
मैले व्याख्या गरेका थियौ, मैले बेरियाका ब्रिगेडहरू आन्दोलनमा कार्टोग्राफिक डेटा एकत्र गर्दछु र म केही पलमा उनीहरूको स्थान हेर्न चाहन्छु वा तिनीहरूलाई पत्ता लगाउँछु।
मई, 2011 मा
त्यहाँ तपाईंसँग छनौटहरू छन्, ताकि कम्पास कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ, जब तपाइँ यसलाई सक्रिय पार्नु भएको छ भने तपाईँले क्षैतिज प्लेटफर्ममा जीपीएसहरू बदल्न अनिवार्य छ भन्ने कुराले निम्नका लागि सोध्छ।
मैले जियोटाग तस्बिरहरूमा बुझ्दिनँ, तपाईले आकारमा छवि-प्रकार फिल्ड सिर्जना गर्नुपर्दछ, त्यसैले जब तपाईं डाटा खिच्नुहुन्छ यसले तपाईंलाई तस्विर लिनको लागि सोध्नेछ।
अल्बेरो मार्लिन भन्छिन्:
नमस्कार, म कोलम्बियामा बस्छु; मेरो मोबाइलमैपेर6छ, मैले ई-कम्पास कन्फिगर गर्न कहिल्यै व्यवस्थित गरेको छु, न त भू-टैग ट्यागमा लिइएको फोटो, यो कसरी भयो? तपाईंको सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद, सफ्टवेयर जीपीएस संग आउछ, र यदि तपाईं यो गर्छन, तपाईंको टिप्पणीको लागि धन्यवाद, यो धेरै सहयोगी छ
तपाईं मोबाइल म्यापर अफिस प्रोग्रामको साथ एक .map फाईल सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यसलाई एस्टेक पृष्ठबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ
ftp://ftp.ashtech.com/ मोबाईल%20 म्यापिंग / एमएमएक्सएनमक्स / एसोसिएशन/
राम्रो दिउँसो, म मोबाइल नक्साङ्कनकर्ता 100 मा खम्बा एक अक्ष अपलोड गर्न आवश्यक, एउटा प्रश्न छ, तर .मानचित्र .dxfo मलाई बताउँछ दुई विकल्प हो, DXF किनभने यसको कन्फिगरेसन सदिश को काम छैन र बिन्दु गुण पहिचान गर्दैन गर्दैन, विशेष नाम, बस बिन्दु अपलोड गर्नुहोस्, .map ले यो उत्पन्न गर्न तरिका फेला पारेन। , तपाईंको ध्यान र यो मलाई हरेक नाम जीपीएस स्क्रिन देखाउन भौगोलिक निर्देशांक भएको फाइल अप कसरी खोल्न जान्न धेरै उपयोगी हुनेछ रूपमा प्रतिक्रिया को लागि धन्यवाद धेरै धन्यवाद
मैले तपाईलाई आकारको आधारमा समस्याहरू दिनुपर्दैन, किनकि यो त्यस्तो ठूलो फाईल होईन। यो यस्तो हुनेछैन कि तपाईं नराम्ररी georeferncias, प्रमाणित गर्न सानो छवि प्रयास गर्नुहोस्।
नमस्ते जी!, प्रश्न, म Google पृथ्वी समर्थक छ, र तपाईंलाई थाहा रूपमा विभिन्न ग्रेड तस्बिरहरू सुरक्षित छ। म उच्चतम गुणस्तर राखन प्रयास र म पृष्ठभूमि छवि सबै सही थप्न MM6 विकल्प गए जब, उनको र सबै पहिचान, तर georeferencie को ठीक बटन दिंदा काम 'केही मा हेर्न !!! मानिएको पृष्ठभूमि छवि देखा पर्दैन, त्यसो त ¿आकार र गुणको सन्दर्भमा छविहरूको लागि कुनै डेटा? एक भाग, के अन्य स्रोतहरूले फोटोहरू पाउन सक्छन्?, त्यो Google धरतीको भाग हो।
सम्भावना खाली गर्न दूरी उपकरण को प्रयास गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् कति गुणहरूको सीमा कति नक्शाको फरक क्षेत्रमा मापन गर्दछ र AutoCAD मा नक्शा संग तुलना गर्नुहोस्।
यो एउटा समस्या हुन सक्छ जुन गलत प्रक्षेपण लिइरहेको छ र यसैले तिनीहरू विकृत देखिन्छ।
के तपाईं कुनै विकृति ढाँचा वा गुणहरू देख्न सक्नुहुन्न जुन देखिएको छैन? उदाहरण को लागी, यदि तिनीहरुसँग धेरै शिरोबिन्दु छन्, यदि तिनीहरू फरक स्तरमा थिए भने, यदि तिनीहरूसँग केहि प्रकारको फरक रेखा छ, आदि।
म मेरो मेगुनी पेशेवर प्रोमर्क3मा नौकरी पठाउन प्रयास गर्दैछु। MobileMapper गर्न र फाइल अपलोड गर्न अटोक्याड DWG फाइल creie त्यहाँ भने फारमहरु सबै धेरै छन्, तर मेरो Maguellan फाइल लोड गर्दा, त्यहाँ मेरो विमान देखेको poligos र अरूलाई विभिन्न tuieran गर्न seeming छैन ढाँचा .. उनीहरूले मलाई बताउन सक्छ कि मेरो फाइलमा यो कारण के हो।
नमस्ते पॉल, मलाई लाग्छ कि सब भन्दा समझदार कुरा तपाईं स्थानीय मेगेलान वितरकको साथ जानुहुन्छ। कम से कम तिनीहरूले गर्नु पर्दछ उपकरणको प्रयोगमा मद्दत गर्नु, किनकि कम्पास मलाई फ्याक्ट्री त्रुटि देखिन्छ।
फोटाहरूको बारेमा के हो, बाह्य बटनहरूसँग प्रयास गर्नुहोस्।
पल पेरू भन्छिन्:
नमस्कार मित्र हालै एक MM6 किनेको, तर एउटा ठूलो पक्षमा, म मात्र केही भर्न व्यवस्थापन, छैन नीलो, कताई को पछि लगभग5मिनेट संग सर्कल भर्न व्यवस्थित चरणहरू पालना यद्यपि, elctronica Brujula जाँच्नका सक्दैन भागहरु र म एक सूचना प्राप्त गर्दछ कि यो ई कम्पास गणना गर्न सम्भव थिएन। अर्को प्रश्न म बिन्दु छवि विशेषता दिन रूपमा फोटो लिन सक्छ कसरी हो, र जब म तस्वीर लिन क्यामेरा सक्रिय छ तर मलाई म तस्बिर लिन सक्नुहुन्छ जहाँ कुनै पनि बटन छोड्न छैन।
विल्सन एन। भन्छिन्:
नमस्कार मित्रहरू, म एक समस्या छ। म एक SHP फाइल, तर हालको स्थिति को SHP पत्र को स्थानहरू एकै समयमा पर्नु छैन संकेत कर्सर स्थान (अफसेट छ 0,5 मी) तपाईं के गर्न सक्छ भइरहेको थालनी तह रूपमा खोलिएको?
अमीन वी भन्छिन्:
शायद मेरो प्रश्न सजिलो छ, तर वास्तवमा म हप्ताको लागि फिसलिएको छु र म केवल आफ्नो किसिमको मद्दत प्रयोग गर्न सक्दिन।
मेरो कार्यालयमा MobileMapper6छ, र हामीले भ्रमणको दौडान गति डेटा प्राप्त गर्न आवश्यक छ। यो यसलाई स्वचालित रूपमा रिपोर्ट गर्दैन किनकि, हामी यसलाई दूरी र समय मार्फत गर्ने निर्णय गरे। दूरीको लागि, हामी एक्सेल फाईलहरूलाई नक्सा स्रोत प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गर्छौं। तर जब तपाईं समय लिनुहुन्छ, GPS ले प्रत्येक समय मा सुरू समय दोहोरिन्छ। हामीले पहिले नै ईन्टरनेट खोज्यौं, वितरकसँग सम्पर्क गरे, एस्केकबाट टेक्नोलियन सहयोग र म्यानुअल्सहरू सयौं चोरी बिना नतिजाहरू पढ्नुहोस्। म यो उपकरण हामीलाई यस कन्फिगर कन्फिगर गर्न मद्दत गर्न सक्छ कि यो प्रत्येक पङ्क्तिको समय रिपोर्ट गर्दछ जुन यो एक यात्रा यात्रा को समयमा उठ्छ। धन्यवाद
राम्रो दिन, म कार्यक्रम तर हराएका आए जो सीडी स्थापना हुनेछ, एक मोबाइल नक्साङ्कनकर्ता 6, गत वर्ष किनेको जो छ, अब के हुन्छ यो मोबाइल म्यापिङ पुन आवश्यक हुन्छ भन्ने छ, तर केवल फेला 1.44 संस्करण र जीपीएस कि प्रयोग भएको थियो किनभने 2.0, तपाईंलाई थाहा थियो म कहाँ मोबाइल म्यापिङ को कि संस्करण पाउन सक्नुहुन्छ, मलाई प्राप्त?
म धेरै सहयोगको प्रशंसा गर्नेछु र म तपाईंलाई यो रोचक पदको लागि बधाई दिन्छु।
थप सन्दर्भको लागि, PDF लाई निर्दिष्टीकरणका साथ डाउनलोड गर्नुहोस्:
स्क्रिन आकार २.2.7 is छ (कुनादेखि कुना)
QVGA रिजोल्युसन 240 X 320 पिक्सल हो
फ्रान्सेस्को भेजजेज भन्छिन्:
म अन्य उपकरणसँग तुलना गर्न स्क्रीनको रिजोल्युशन जान चाहन्छु
PABLO PINTO भन्छिन्:
कोलम्बियाबाट, गुप्त अभिवादन, तिनीहरूले मलाई कोडका लागि सम्पर्क गर्नुभएन .. तपाईले मलाई सम्पर्कको साथ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ ???
अरे विल्सन, MM6 आकार फाइल प्रकार नक्साहरू प्रयोग गर्दछ, जस्तै ArcView सँग प्रयोग गरिन्छ।
अरे पब्लो, मैले पहिले नै म्यागेल प्रतिनिधिलाई इमेल पठाएको छु जसले तपाईलाई सहभागी हुन सक्छ, मलाई आशा छ कि म भोलि गर्दैछु।
मलाई प्रयोगकर्ता म्यागेलन मोबाइलमैप6लाई सम्पर्क गर्न आवश्यक छ
यदि मलाई सम्भव छ प्राधिकरणको लागी म म्यागेल मोबाइल म्यापर्स प्रयोगकर्ताको सम्पर्क गर्न आवश्यक छ
पाब्लो पिनटो भन्छिन्:
धन्यवाद, ईन्जिनियरिङ्। मलाई पोस्ट कोड र म्यापिंग को लागि MM6 को लागि क्षेत्र मा डेटा लेने को लागि प्राप्त गर्न को आवश्यकता हो। के कृपया मलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ म तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न सक्छु? म कोलम्बियामा छु
इन्ग। म कोलम्बियामा छु, तपाईंको निर्देशनको लागि धन्यबाद
विल्सन nivelo भन्छिन्:
नमस्ते मान्छे, यदि तपाईं मलाई सूचित गर्न सक्नुहुनेछ म म MM6 मा प्रयोग गर्न को लागि भूमध्य रेखा को मानचित्र प्राप्त गर्न सक्छु।
र तपाई कुन देशमा हुनुहुन्छ? कसलाई सम्बोधन गर्ने थाहा छ।
धन्यवाद, ईन्जिनियरिङ्। मलाई पोष्ट कोड र म्यापिङ कि क्षेत्र मा डेटा लिन सक्षम हुन को लागि खरीद गर्न को आवश्यकता हो। के तपाईं मलाई खरीद गर्न सक्नुहुन्छ मलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ? र उचित मूल्यमा? MM6 का लागि
धन्यवाद, ईन्जिनियरिङ्। मलाई पोष्ट कोड र म्यापिङ कि क्षेत्र मा डेटा लिन सक्षम हुन को लागि खरीद गर्न को आवश्यकता हो। के तपाईं मलाई खरीद गर्न सक्नुहुन्छ मलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ? र उचित मूल्यमा?
जहाँसम्म मलाई थाहा छ, त्यो टोलीले Windows मोबाइल समर्थन गर्दैन।
Enrique Altamirano भन्छिन्:
Egeomates प्रिय महोदय, म दुई promark3विन्डोज इस्वी संवत्, छ म ArcPad स्थापना गर्न चाहन्थे तर MA असम्भव छ, म कि perativo सिस्टम छ, यो अपरेटिङ सिस्टम, उदाहरणका लागि Windows मोबाइल परिवर्तन गर्न सम्भव छ मान्छु।
नमस्कार र जाँदैछ।
सीईलाई यस विन्दुमा सिफारिस गरिएको छैन, यो धेरै पुरानो कम्प्युटर हो, मैले बुझें कि यो अझै विन्डोज सीईमा चल्दछ। MM6 को केस एक राम्रो विकल्प हो किनभने यो विन्डोज6मा पहिले नै चल्दछ, र धेरै समस्याहरू जुन अघिल्लोले सुनेन।
अब, यदि तपाईं दुई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, दुई MM6 तपाईंको लागि काम गर्दैन, किनकि त्यो टोली बेस हुन सक्दैन, केवल रोभर। यदि तपाइँ एक आधारको रूपमा राख्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँले एक मोबाइल म्यापर प्रो, एक प्रोमार्क एक्सएनयूएमएक्स वा मोबाइल म्यापर3प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
केवल एक प्रयोगको लागि र Rinex डाटा संग सुधार गर्न को लागी, ठूलो सटीकता को उम्मीद छैन। MM6 उही कार्य क्षेत्रमा काम गर्ने Promark3 टोलीबाट डाटा सहित 1.30 मिटर चल्छ रेडियल accuracies दिन्छ। यसैले निकट आधारको साथ अल्कुलिजहरू यस भन्दा माथिको हुनेछ।
कर्डियल अभिवादन, उत्कृष्ट टिप्पणीहरूले एक राम्रो अभिविन्यास प्रदान गर्दछ।
म कोलम्बियामा बस्छु र म कामको सर्वेक्षणको लागि जीपीएस प्राप्त गर्न चाहान्छु, विकल्पहरू मोबाइल म्यापर सीई वा एमएमएक्सएनयूएमएक्स छन्, क्वेरी निम्नानुसार छ, पोस्ट प्रोसेसिing कार्यको लागि दुई टोली आवश्यक छ, एउटा बेसको रूपमा र अर्को मोबाइलको रूपमा वा म मात्र गर्न सक्दछु। एक बीकन एन्टेनाको साथ एक खरीद गर्नुहोस् र नजिकैको बेसबाट राइनेक्स फाइलहरू अनुरोध गर्नुहोस्, यदि त्यसो हो भने, बेसबाट काम गर्न अधिकतम दूरी के हुनेछ। तपाइँको मद्दत को लागी धन्यवाद, यसलाई जारी राख्नुहोस्।
जर्मन Espinoza भन्छिन्:
अभिवादन, पहिलो म तपाईंलाई यो ब्लग बनाउनको लागि म धेरै उपयोगी भएको हुनाले, म एक MM6 छ धन्यवाद, म पहिलो समस्या म मात्र मेनुमा दुई विकल्प, दर्ता र एकाइहरु मोबाइल म्यापिङ देखा छ को DGPS देखा र कच्चा डेटा आदि रूपमा पालना ती, म एके यो समस्या थाहा र कारण कम्प्युटरमा समक्रमण गर्न चाहनुहुन्छ तर इन्टरनेटमा जडान गर्न MM6 कसरी कन्फिगर गर्न थाहा छैन, म एक वायरलेस सेलुलर मोडेम वा मोबाइल फोन छ, तिमी मलाई धन्यवाद भने कसरी यी गतिविधिहरु प्रदर्शन गर्न म एक नागरिक इन्जिनियर हुँ देखि म सराहना गर्नेछन् र म भूमि सर्वेक्षण गर्न आवश्यक र म यो उपकरणसँग elevations ट्राभर्स गर्न चाहनुहुन्छ, आशिष्
ह्यूगो यायर भन्छिन्:
श्री geofumadas, एक cordial ग्रीटिंग, म तपाईंलाई कोलम्बिया देखि लेख्छु।
मसँग एक जीपीएस म्याग्नल मोबाइल म्याप6छ र मलाई यो तरिका कन्फिगर गर्न समस्या छ जसले मलाई फ्लैट वा आयताकार समन्वयमा काम गर्न अनुमति दिन्छ। मैले निर्देशनहरू पालन गरेको छु तर प्रस्ताव प्रस्ताव नगर्ने कोलम्बियाका लागि के आवश्यक छ। यदि तपाईं यस सन्दर्भमा मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ भने म धेरै कदर गर्दछु। अहिलेसम्म मलाई भौगोलिक समन्वयमा वा पोस्ट प्रोसेसिंगमा काम गर्ने कुनै समस्या छैन। तर त्यहाँ समय हो जब मलाई योजना समन्वय संग काम गर्न आवश्यक छ। धन्यवाद
तिनीहरू दुई फरक समूह छन्। ट्राइटन एक ब्राउजर मात्र हो, यसले विन्डोज मोबाइल ल्याउँदैन, त्यसैले यसले आर्कप्याडलाई समर्थन गर्दैन।
उनको परिमाण तीन मीटर सम्म हिड्छ, जबकि mm6 postproceso लाई समर्थन गर्दछ यसको परिशुद्धता नजिक वा मीटर भन्दा कम।
इजराइल रोमीरो मार्टिन भन्छिन्:
विशेषता र निर्दिष्टता के फरक फरक फरक फरक छ6मोबाइल म्याप र 2000 ट्रिटन को बीच, 8 आर्ट प्याड सफ्टवेयर दुवै कम्प्युटरमा स्थापित गर्न सकिन्छ।
ठीक छ, त्यसपछि यसलाई एस्टेटे पेजबाट डाउनलोड गर्न प्रयास गर्नुहोस्
ftp://ftp.ashtech.com/ मोबाईल%20 म्यापिङ् / मोबाईलमैपेर% 206 / सफ्टवेयर / मोबाईलमैपेर% 20SW/
म यसलाई अफसोस र ActiveSync स्थापना गर्नुहोस्, तर डिस्कमा मैले MobileMapping फेला पार्न सक्दिन।
के गर्न सक्नु हुन्छ? मलाई यो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ
नमस्ते, बक्समा डिस्क आउँछ, तपाइँले ActiveSync स्थापना गर्नु पर्छ, त्यसपछि यन्त्रलाई PC मा जडान गर्नुहोस्, र यसको अर्थ यसको द्वारा Mobiel म्यापिंग डिस्कमा आउँछ।
साथै बक्समा एक कागजात हो जुन ग्यारेन्टीको शर्त र postprocess को सक्रियिकरण कोड छ।
यदि तपाईंको साथीले एउटा पसलमा उपकरण किन्नुभयो भने, सबै कुरा आउँदछ।
म केहि संस्करणहरु को बारे मा जान्छ कि केवल प्रणाली अंग्रेजी मा आउछ।
नमस्कार, कोलम्बिया बाट। म पहिले अंग्रेजी सञ्चालन प्रणाली, प्रक्रियापछि, कुनै विचार को लागि कोड आउँछ र माथि यो मोबाइल म्यापिङ आवेदन देख्न, म अमेरिकामा एक मित्र मार्फत, एक MobileMapper6प्राप्त गरेको छ, एक गम्भीर समस्या छ।
कृपया कृपया मलाई निर्देशन दिनुहुन्छ?, मलाई यसलाई स्पेनीमा पठाउन र क्षेत्रमा डेटा खिच्न सक्षम हुन आवश्यक छ। मैले सधैं MobileMapper प्रो संग काम गरेको छु र यो धेरै फरक छ।
यो समस्या हुनु हुँदैन।
समस्या डाटा डाउनलोड छैन। समस्या आउँदछ जब म मोबाइल म्यापि start शुरू गर्दछ नयाँ एन्टर्स एक .map मा स्तरमा पंजीकृत गर्नका लागि ... यो गर्न सम्भव छैन किनकि GPS ले स्क्रिनमा जानकारी प्रदान गर्दैन। के तपाईंलाई लाग्छ कि यो सम्भव छ किनकि यो पीसीमा जडित छ? के यो पीसीमा जडित GPS डेटा क्याप्चर गर्न सम्भव छ?
ठिक छ, मलाई थाहा छैन, यो पोर्ट समस्या हुनेछ। तपाईं एसडी मेमोरी हटाएर डाटा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ
USB। यदि तपाईं ActiveSync स्थापना गर्नुभयो ... र यो काम गर्दछ (किनभने त्यस तरीकाले GPS मा सफ्टवेयर स्थापना गर्नुहोस्)।
र तपाईं कसरी उपकरण जडान गर्दै हुनुहुन्छ? USB? के तपाईले एक्टिभसिन्क स्थापना गर्नुभयो?
राम्रो मित्र ... आज मोबाइल म्यापि। र मोबाइल म्यापर स्थापना गरेपछि (यी दुई जीपीएसमा) र मोबाइल म्यापर office अफिस (पीसीमा), म तिनीहरूको कार्यविधि अनुसरण गरेको छु। जहाँसम्म, मोबाइल म्यापि starting सुरू गर्दा, निम्न सन्देश देखा पर्दछ: GPS GPS मा जडान हुन सक्दैन » यसको मतलब के हो र मैले समस्या कसरी समाधान गर्ने छु किनकि म डाटा क्याप्चर गर्न सक्षम छैनु।
म तपाईंको दयालु सहयोगको सराहना गर्छु र म तपाईंको कामको लागि बधाई दिन्छु।
खैर, तपाईंको संदेहहरू यहाँ छोड्नुहोस्, हेर्न हामी के साथ मद्दत गर्न सक्छौं
ईगल। पाब्लो भन्छिन्:
यस साइटमा एकीकृत हुन म कृतज्ञ हुनेछु किनकि मैले भर्खर एक पोस्ट प्रोसेस XMUMX मगेलन मोबाइल म्यापर जीपीएस किनेको छु र यसको प्रयोगको बारेमा मलाई धेरै शंकाहरू छन् abradesco ले मलाई समर्थन गर्न सक्दछ धन्यवाद
मारियो रोबर्टो अर्जुननाल भन्छिन्:
होन्डुरसबाट सिर्डियल अभिवादन, यस्तो एक सुन्दर कार्यक्रमको लागि रिश्ते, अध्ययन अध्ययन, काम सुधार गर्न हरेक दिन चिन्ताजनक कार्यक्रमको लागि।
सबैको लागि उच्च बाट आशिष्हरू
मई, 2010 मा
.Map फाइल को विशेषताहरु, तपाईं लोड हुँदै हुनुहुन्छ आकार फाइल को रूपमा एक नै प्रणाली छ?
तपाईं आरपीआर छ?
सामान्यतया प्रणालीले ओगटेको छ: तीन आकृति फाइल फाईलहरू: .shp, .dbf, .shx र .Pj जुन प्रक्षेपण समावेश गर्दछ। त्यसपछि एक .drw कि म के को लागी याद छैन।
Gustavo Garcia भन्छिन्:
नमस्ते .. मँ म हुँ अरु फरक भौगोलिक क्षेत्रबाट केहि SHPs खोल्न चाहन्छु .. जब म प्रक्रियाको अनुसरण गर्दछ यसले मलाई सन्देश पठाउँदछ «लेयर थप्न सक्दैन। तहको समन्वय प्रणाली सक्रिय नक्सा विकल्पसँग मेल खाँदैन। » यद्यपि, अवश्य पनि म सहि समन्वय प्रणाली र प्रोजेक्शनमा छु, म मद्दतको कदर गर्छु ... म GPS को प्रयोगबाट सुरू गर्दैछु तर म प्राय जसो आर्कप्याड प्रयोग गर्छु। मलाई लाग्छ कि यो सजिलो छ ... मलाई थाहा छैन
नमस्कार एन्टोनियो, यो राम्रो छ कि जानकारीले तपाईंलाई सेवा गरेको छ।
सर्वेर्न एन्टोनियो पाब्लो रोड्रिगेज भन्छिन्:
श्री जियोमुमादासको लागि त्यहाँ कुनै पनि संदेह छैन कि हामी तपाईंको जानकारी र अन्य अनुसन्धान डेटा जो ठूलो मद्दत र सबैको रुचि हो। हामी विस्तारै जानुपर्छ किनभने तपाईंको पृष्ठ धेरै पूर्ण छ, त्यो बाटो र सुधार राख्नुहोस्।